Igwe nfuli slurry, nfuli ikuku kwụ ọtọ, mgbapụta froth - Boda
Nfuli slurry kwụ ọtọ
vetikal sump slurry nfuli
Pumps Slurry Submersible
Mgbapu mmiri nke nwere ike ime hydraulic
Nfuli froth kwụ ọtọ
Mgbapụ Froth kwụ ọtọ
Pump ájá gravel / mgbapụta mmiri
Akụkụ mgbapụta ígwè
Akụkụ mgbapụta rọba
Akụkụ mgbapụta polyurethane
Akụkụ SiC Ceramic Slurry Pump Parts
Mgbapu mmiri kwụ ọtọ
Mgbapụta mmiri mmiri ugboro abụọ
Multistage mmiri mgbapụta
Pipeline Water mgbapụta
Mgbapụta mmiri nsị
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ kwụ ọtọ
Mgbapu mmiri na-asọ asọ
Mgbapụta mmiri na-ekpo ọkụ kwụ ọtọ
Fluoroplastic chemical mgbapụta
Mgbapụta kemịkalụ API610
Pump Centrifugal na-ebupụta onwe ya
Ịchọrọ onye nwere ike ịmepụta ihe ịchọrọ ma nwee nhazi omenala ka ebipụtara na nkọwapụta gị. Mgbe ahụ ọrụ OEM/ODM bụ maka gị!GỤKWUO
Usoro ihe atụ
Ịzụta usoro zuru ezu mgbe ị kwadoro àgwà ngwaahịa. Mgbe ahụ, ọrụ Sample Order anyị bụ maka gị!GỤKWUO
Ọ ga-amasị gị ịga China ma nwee mmasị iso anyị rụọ ọrụ. Mgbe ahụ anyị Factory Tour ọrụ bụ maka gị!GỤKWUO
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd.
Shijiazhuang Boda Industrial mgbapụta Co., Ltd bụ a ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka mba mgbapụta ahịa na PRC. Ọ na-arụ ọrụ mgbapụta & akụrụngwa na-ebugharị, akụkụ mgbapụta & nguzogide iyi nkedo, igwe hydraulic ndị ọzọ, ngwa wdg.
ANYỊ NA Gburugburu ụwa
Ụlọ ọrụ anyị nwere ndị injinia dị elu na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ. O nwekwara nkà ịre ahịa ndị ọkachamara maara ahia mba ofesi nke ọma ma nwee ahụmịhe buru ibu ma juputara na ọsụ ụzọ na mmụọ okike. Ụlọ ọrụ anyị ga-etinye aka na uche "Ndị mmadụ na-adabere , Business iguzosi ike n'ezi ihe" na-egbo ndị ahịa chọrọ ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma; E wezụga na o nwere usoro nlekọta sayensị na omenala ụlọ ọrụ siri ike. Ka ọ dị ugbu a, onye ahịa nke ụlọ ọrụ na-ewe ihe karịrị steeti 50 na mpaghara. Ọ ewepụtala netwọk ahịa siri ike, usoro ọrụ kwesịrị ekwesị na mkpakọrịta azụmaahịa siri ike.
Akụkụ Froth Pump Parts
YZQ usoro hydraulic submersible slurry mgbapụta
TZG(H) Ihe mgbapụta aja aja aja
Igwe ntụtụ nri kwụ ọtọ
mgbapụta rọba slurry na-eyi na-eguzogide
D, DM, DF, DY usoro multistage centrifugal mgbapụta
Igwe eji arụ ọrụ nkenke
Shijiazhuang Boda Industrial mgbapụta Co., Ltd na-elekwasị anya bụ isi na mmepụta na ọkọnọ nke elu àgwà slurry nfuli na slurry mgbapụta akụkụ. A na-emepụta nfuli anyị maka ebe ndị na-agbapụta ihe na-adịghị mma na nke na-emerụ emerụ. Ha nwere ike ime ya nke chrome dị elu, ụdị dịgasị iche iche nke elastomers ma ọ bụ ihe kachasị ọhụrụ na seramiiki maka ndụ ogologo ndụ na arụmọrụ dị elu.
Ọ tumadi na-arụ ọrụ mgbapụta & mgbapụta chụpụrụ equipments, mgbapụta akụkụ & iguzogide yi nkedo, ndị ọzọ haịdrọlik ígwè, ngwa wdg The ngwaahịa nwere slurry nfuli, API 610 petrol-mmanụ & chemical nfuli, mmiri nfuli nke nwere iri puku kwuru iri usoro , ihe karịrị otu narị otu narị. iche , ọtụtụ puku ụdị. A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe na Ngwuputa, metallurgy, coal Ngwuputa, ọkụ eletrik, mmanụ ala, chemical , mmiri na-enye mmiri na drainage ụlọ ọrụ na na.
Ha bụ akụkụ ndị a na-agbanwe agbanwe na otu ụdị ama ama n'ụwa niile na azụmahịa mgbapụta slurry. Nke ahụ pụtara mbelata ego ndị ahịa na-akwụ n'ihu n'ihi nchikota ngwa ahịa yana mgbanwe na ngwa ndị dị adị. Ọbụghị naanị na Boda na-enye ọnụahịa asọmpi na nnyefe ngwa ngwa, anyị ji onwe anyị nganga na ọkwa ọrụ na nkwado teknụzụ anyị na-enye ndị ahịa anyị.
Ọ bụghị naanị okwu ịnweta ọnụahịa na nnyefe kacha mma mana ọrụ kacha mma. Echere m na ị ga-ahụ na-eme a onye òtù ọlụlụ nke Shijiazhuang Boda Industrial mgbapụta Company ga-abụ gị mkpebi kacha mma maka na-ezi uru na-edozi gị slurry mgbapụta nsogbu.
Ụlọ ọrụ anyị ga-etinye aka na uche "Ndị mmadụ na-adabere , Business iguzosi ike n'ezi ihe" na-egbo ndị ahịa chọrọ ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma; E wezụga na o nwere usoro nlekọta sayensị na omenala ụlọ ọrụ siri ike. Ka ọ dị ugbu a, onye ahịa nke ụlọ ọrụ na-ewe ihe karịrị steeti 50 na mpaghara. Ọ ewepụtala netwọk ahịa siri ike, usoro ọrụ kwesịrị ekwesị na mkpakọrịta azụmaahịa siri ike.
Nweta ozi ọhụrụ n'aka anyị
North nke Shilipu Village, Chang'an District, Shijiazhuang, China.